Uganda Tourism Iye zvino Inotarisira maCEO muDomestic Incentive Travel Drive
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda Tourism Iye zvino Inotarisira maCEO muDomestic Incentive Travel Drive
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News
Uganda CEOs kudya kwemangwanani
Iyo Uganda Tourism Association (UTA) uye Private Sector Foundation Uganda (PSFU) yakaronga maCEO emangwanani uye kuratidzwa neChishanu, Gumiguru 22, 2021, kuKampala Sheraton Hotel.
Chiitiko ichi chakaitwa pasi pechirongwa cheCOVID-19 Economic Recovery And Resilience Response Programme (CERRRP).
Izvi zvanga zviri zvekukurudzira kufamba muchikamu chemakambani akanangana nevakuru vemakambani akazvimirira neveruzhinji nemakambani.
Chiitiko ichi chakavhurwa neMunyori Mukuru (PS) weMinistry of Tourism Wildlife and Antiquities (MTWA) Doreen Katusiime.
Achitaura nevakuru vevakuru vakuru nevaratidziri vaivepo, zvakanyanya uye nemuviri, akataura kuti masangano akazvimirira akasangana nekurasikirwa nemabasa, kuderedzwa, kurasikirwa kwemari mumabhizinesi uye padanho renyika, uye kurasikirwa kwemari yekunze iyo yakatyisidzira kuchengetedza. Zvisinei neizvi, musika wepamusha wakaratidza kuve wakavimbika mukutarisana nematambudziko aya.
Akataura kuti kuri kuwedzera kushanya kwevanhu vekuUganda kunzvimbo dzakasiyana dzekushanya dzinosanganisira mapaki emunyika, Source of the Nile, beachfronts, Uganda Wildlife Dzidzo uye Conservation Center (UWEC), zvitsuwa, uye mune imwecheteyo nzira yekuwana zvivakwa zvakavandudza hunhu hwekufamba uye mari yekugara uye yevashanyi zviitiko zviri kukura zvishoma nezvishoma. Akawedzera kuti kudiwa kunotsigirwa nekukura kuri kuita vepakati, kuwanda kwechikamu chemakambani, uye shanduko yeICT yakaita kuti ruzivo ruwanikwe.
"Vazhinji vekuUganda vane mari yekuzvisarudzira uye nzira dzekuwedzera mari yavo yekushandiswa. Izvi zvakanaka zvinowana zvinotaridza mukana usina kunyanya kushandiswa. Kudiwa kwekushanya kwemumba kunosundwa nekushanyira shamwari nehama; kutama kwemaguta kumaruwa; zviitiko zvetsika; nemitambo inosanganisira kuzvarwa, michato, yekugadzwa, nezvimwe. Zviitiko izvi mhemberero dzinosunga nharaunda yedu, uye zviitiko zvechivanhu mushure mekudzoserwa kwemadzimambo echivanhu zvakaunzawo mafaro akawanda anosanganisira kupemberera kugadzwa kwehutongi pamwe nekushanyirwa nevakuru vetsika nemagariro kune vanhu vavo,” akadaro PS.
Akatsanangura vamwe vatyairi vekushanya kwemumba zvinosanganisira zviitiko zvekutenda, inonyanya kuzivikanwa kuve yegore negore Namugongo Uganda Martyrs Pilgrimage musi waChikumi 3, Pentecostal crusades, makonferensi, kurudziro, misangano, uye misangano yave chishandiso chine simba chekusimudzira magariro nehupfumi uye. mamwe madhiraivha ekukurudzira anoti kufamba nekuda kwezvikonzero zvekurapa, varaidzo, kutenga, dzidzo, uye tsvagiridzo.
Vakarumbidza Master Card Foundation nekuuya kuzotsigira chikamu chekushanya kuti chigadzirise uye chigadzirise uye akakumbira vakuru vemakambani vari kuenda panyama nepainternet kuti vagamuchire kurudziro yekufamba.
Mutauriri mukuru uye Private Sector Foundation Uganda (PSFU) Acting Executive, Director Francis Kisirinya, vakati chinangwa chekudaidzira kudya kwemangwanani ndechekudzoreredza rwendo rwekukurudzira zera pakati pemasangano nevashandi vekuUganda. Mukupembedza kwake, akati imhaka yekuti masangano emakambani nevashandi vavo vane mari inoraswa inogona kuiswa mukukurudzira kufamba.
Vakavimbisa kuti PSFU ichashanda nesimba kuona kuti masangano akazvimiririra ane nharaunda yakanaka yebhizinesi kuburikidza nekutaura, kukwezva, uye tsvakiridzo yekusimudzira mabhizinesi. Vati chikamu chekushanya nekugamuchira vaenzi ndechimwe chezvikamu zvakanyanya kurohwa nemhedzisiro yeCOVID-19 denda. Nekudaro, parizvino chikamu ichi chiri kuona nzira yakadzikama yekudzoreredza kuburikidza nematanho emidziyo akaiswa nehurumende.
Sekureva kwemushumo weMTWA, denda reCCIDID-19 rakakurudzira vanhu vekuUganda vaimbotadza kuenda kunoshanyira zvinokwezva mukati menyika yavo. Pakati paNyamavhuvhu 2020 naKurume 2021, kushanya kwemumba kwakawedzera katatu kubva pa21,000 kusvika 62,000 vashanyi. Tichienda nenhamba idzi, chirongwa ichi chinowedzera nhamba yepamusoro kubva munaKurume kusvika Zvita tichitarisa kuti indasitiri iri kuenda mumwaka wepamusoro.
Akatsanangura Kukurudzira kufamba semubairo kana chirongwa chekuvimbika chinotora chimiro cherwendo rwese-mari-yakabhadharwa nechirongwa chezviitiko zvakarongwa uye zviitiko. Mabhizinesi ehurumende neakazvimirira oga anosanganisira kufambisa mafambiro anocherekedza mabhenefiti kubva pakuvimbika kukuru kubva kuvashandi, hukama hwakasimba hwechikwata pakati pevashandirwi nevashandi, kurudziro yakachengetedzwa, kupa zvinangwa, kukwikwidza kune hutano munzvimbo yebasa, kukurudzira hunyanzvi hwevashandi uye kubudirira, kugadzira tsika yekambani yakanaka, uye kuita kuti bhizinesi riwedzere kukwezva kune vanotora.
Akawedzera kuti kurudziro yekufambisa ine hukuru hweshanduko yehupfumi nemagariro kune vashandi uye kuhupfumi izvo zvinogona kusanganisira kukurudzira kukura kwakasimba kwekuita uye kurudziro, kugadzira kukura kwekutengesa kunoyerwa, uye kudzoka pakudyara. Kuburikidza nekuzvipa mari, inopa chiitiko chakasiyana chevezera vanofamba nevatungamiriri vekambani iyo inoshanda zvakanyanya kupfuura kana ivo vachifamba vega. Inotsigirawo kugona kuwiriranisa zvinangwa zvekambani, zvinangwa zvemunhu, uye kurudziro yemhando. Tsvagiridzo ichiri kusimukira inoratidza kuti kubatana kwepfungwa neiyo brand kune simba kupfuura izvo zviripo zvinokurudzira zvega zvinotyaira kutengesa kuedza.
Kufamba kwechikurudziro kunewo kukanganisa kwehupfumi sezvo kufamba muhupfumi huri kusimuka kuri kukurudzira kukuru kumutsiridza hupfumi hwenyika sezvo misangano yekutarisana inokurudzira kubatana nekubatana kwevanhu. Mahotera anoenderana nemafemu ekutungamira kwekuenda anowana kudzoka kwakanaka pakudyara uye basa rakananga kune vechidiki vanouyawo. Naizvozvo, vakakurudzira maCEO aripo pamwe nemasangano ehurumende kuti aise mitemo inosimudzira IT nemadhipatimendi ekutonga ayo anowanzo furatirwa.
Vakurudzira hurumende kuti itsigire mukugadzira nekugadzira nhungamiro dzechigadzirwa chakakura chekushanyirwa kukurudzira kukwikwidza munzvimbo dzemisangano, kurudziro, makonferensi nemashoo (MICE), agro tourism, nharaunda-based tourism, tsika-based tourism, zvechitendero kushanya, nezvimwewo.
Simbiso inofanira kuiswa pakunyora zviitiko zvakasiyana siyana kuitira kuti zviwanikwe kune vekuUganda uye zvichagadzira chimiro chakasimba chenyika uye kugadzira dudziro inowirirana yenyaya yeUganda pane dzakasiyana siyana zvigadzirwa zvekushanya uye kuisa mari mukutsvaga kwemusika.
Vakatenda mubatsiri uye vanotsigira sangano reMaster Card Foundation, nekuuya nebhajeti reUGX32 bhiriyoni (US$8.98 miriyoni) iro ravakapa kuhurumende nemasangano akazvimiririra. Izvi zvakashongedzera zvivakwa zvehutano zviuru makumi mana zvePCR test kits, midziyo yemarabhoritari muUganda National Bureau of Standards (UNBS) yezvitupa zvechigadzirwa, mibhedha yechipatara, zvekuzvidzivirira nazvo (PPEs), uye zvekuchengetedza.
Vakapedzisa nekuzivisa kuti PSFU iri kushandawo nehurumende kugadzira hurongwa hutsva hwekuvandudza makambani akazvimirira kuti vabude muCCIDID-19, uye pasuru iyi inosanganisirawo hurongwa hwekudzoreredza nekusimbaradza uye chimwe chezvabuda chiri musangano uyu wemangwanani. .
Vachirumbidza mharidzo yaKisirinya, Peter Mwanje, RT weUganda Chapter, kambani yakazvimirira yekukurudzira vanhu, vakati vachiwedzera kuti zvirongwa zvekukurudzira zvinogona kusanganisira basa rekambani, semuenzaniso kupenda bhuroko rechikoro, kana kungoenda kuimba yekutandarira, kana kumahombekombe, kana adrenaline. mabasa. Akayambira vanoshanya kuti vagadzire dhesiki rakasiyana rekukurudzira kufamba, nekuti rakasiyana nemisangano.
Akadzokorora zvakare kune maCEO kuti zvirongwa zvekukurudzira hazvizokanganisa mabhajeti avo chero nzira sezvo vaizongoshandisa chikamu chemari inowanikwa kubva kune yakawandisa mupurofiti. Inoverengera 7% yezvese bhizinesi rekushanya zviitiko rinoita mari inosvika US$75 bhiriyoni pasi rose.
Pearl Horreau, Mutungamiriri weUTA, bato repamusoro rekushanya, kushanya, uye nzvimbo yekugamuchira vaenzi, vakakumbira maCEO kuti vashandise kushanya kwemumba serimwe simba rekukurudzira vashandi vavo nekuvapa mibairo kunyangwe vachibhadharwa zororo kuitira kusimbisa kubatana kwemakambani uye. kusimudzira budiriro panzvimbo yebasa.
Mharidzo idzi dzakateverwa nechikamu chechikamu chevanhu vane mukurumbira muindasitiri inotungamirwa naCommissioner of Tourism weMTWA, Viviane Lyazi. Yakanga yakagadzirwa neUganda Tourism Board (UTB) Mutevedzeri Mukuru weBradford Ochieng uye Sachigaro weSangano re Uganda Tour Operators (AUTO) uye nhengo yeBhodi yePSFU, Civy Tumusiime Ochieng, uyo akati Uganda inyika yechina yakasiyana-siyana pasi rose maererano netsika. Akataura kuti ongororo yakaitwa neBBC muna 2019 kune vari kunze kwenyika yakaona kuti Uganda ndiyo nyika ine hushamwari pasi rose. Nekudaro, iyo yekupedzisira yemakwikwi indekisi kudzidza yakatara Uganda pa112 kunze kwenyika zana nemakumi mana. Panyaya yehutano nehutsanana, yaive 140 kubva pa136 rinova dambudziko guru. Vakayambira kuti vanofanirwa kuita kuti kwavanoenda kutange kukwezva uye kuve nemakwikwi. Civy Tumusiime akakurudzira maCEO kuti apinde muchirongwa chekushanya kwedzimba nekukurudzira vashandi vavo nemhuri dzavo nenzendo dzemumba, sezvo vadiki vachikura vachigamuchira tsika.
Makambani airatidzira kubva kumasangano akazvimiririra aisanganisira National Arts and Cultural Crafts Association yekuUganda, Murat Studios, Arlanda Tours and Travel, Orogu Tours, Petnah Africa Tours, Voyager African Safaris, Lets Go Travel, FCM Travel Solutions, Pristine Tours, Buffalo Safari Lodge, Papyrus Guest House, Park View Safari Lodge, Sites Travel, Gazelle Safaris, Gorilla Heights Lodge, Pinnacle Africa, MJ Safaris, Asante Mama, Go Africa Safaris, Maleng Travel, Talent Africa, neToro Kingdom.
November 12, 2021 pa 06: 33
Zvakanaka kuona Uganda yakatarisa pamusika wepamba. Mushanyi wepasi rese anoda vhiza yekushanyira uye iyo e-visa system ichiri kuzara nematambudziko. Izvi zvinofanirwa kugadziriswa ASAP.